वध : थाहा छैन यस्तो किन हुन्छ? :: PahiloPost
वध : थाहा छैन यस्तो किन हुन्छ?
झम्झम् पानी परिरहेको थियो। एउटा बीस–बाइस वर्षे युवक नयाँ सडकको पेटीमा टुक्रुक्क बसेर रुझिरहेको थियो। ऊ दुब्लो थियो। एउटा थोत्रे र भ्वाङ् परेको कम्बलले उसले आफ्नो शरीर ढाकेको थियो। झुस्स दाह्री थिए। लामो र लट्टा परिसकेको कपाल। उसका आँखाहरु शून्यमा टोलाइरहेका प्रतित हुन्थे। ऊ लगातार ‘हो... हो...हो...’ गर्दै लामो र अनौठो लय हालेर एकोहोरो अनि उराठलाग्दो धून गुनगुनाइरहेको हुन्थ्यो। घरीघरी सडकबाट भुस्याहा कुकुरहरु वर र पर दगुर्ने गर्दथे। अनि ती बेतहासा भुकिरहेका पनि हुन्थे।
उसले सपनामा देख्ने गरेको जस्तै एउटा झुत्रे युवक सडक पेटीमा कम्बल ओढेर टुक्रुक्क बसेको थियो। अनायाशै डा. थापा त्यो युवकको छेउमा पुग्यो र उसलाई नियालेर हेर्न थाल्यो। त्यस्तै भ्वाङ् परेको कम्बल, झुस्स दाह्री, लट्टा परेको लामो कपाल ...। उसले युवकको चेहरा झन् नियालेर हेर्यो। बिल्कुलै उस्तै। उसले सपनामा देख्ने गरेको युवकसँग काटीकुटी मिल्थ्यो यो युवक।
ठीक त्यसैबेला पानी दर्किन थाल्यो। पानी दर्किनासाथ युवकले एउटा उराठलाग्दो ‘हो...हो ...हो...’ धुन गुनगुनायो। डा. थापा फेरि नराम्रोसँग झस्किन पुग्यो। उसलाई चिट्चिट् पसिना पनि आइरहेको थियो। ऊ एउटा घनघोर आश्चर्यमा हेलिन पुगेको थियो। यो बिल्कूलै त्यही धून थियो जो सपनाको युवकले पनि गाउने गथ्र्यो। सबै कुरा उस्तैउस्तै लाग्दै गइरहेको थियो। डा. थापालाई आश्चर्य र भयले एकसाथ आक्रमण गरेको थियो।
‘त्यही केटो ! हिँजो सरको कठालो समात्ने ...।’
वध : थाहा छैन यस्तो किन हुन्छ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।